नीर शाह, बरिष्ठ अभिनेता २०७७ श्रावन २१
नेपालको चलचित्रकर्ममा मैले दुईवटा काम मनै देखि गरेको छु ।
चलचित्रमा अभिनय गर्नु सहज काम हैन । झन निर्देशन त त्यो भन्दा गरुङ्गो र चुनौतीपूर्ण । अभिनय गर्दा अभिनेता वा अभिनेत्रीले आफ्नै भुमिकामा मात्र सिमित रहेर काम गर्छन, निर्देशन गर्दा निर्देशकले चलचित्रमा सवै सानो ठुलो भुमिकामा अभिनय गर्छ र ती भुमिकाहरुको अन्तर सम्वन्धको समन्वयन – यो एउटा क्रिल्ष्ट काम हो । तर नेपाली चलचित्रकर्ममा धेरैजनाले यी कामहरुलाई सजिलो ठानेर गरे अथवा सजिलो ठाने । गल्ती त्यही भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । सवैभन्दा गाह्रो काम सवै भन्दा सजिलो सीत गर्न खोज्नु ।
मेरो सन्दर्भमा मैले धेरै अभिनय गरेको छु । तर थोरै सिकेको छु । थोरै निर्देशन गरेको छु तर अलि धेरै सिक्ने अवसर पाएको छु । यो मेरो आत्म विश्लेषण हो ।
Know more about 'Nir Shah'
अब म बाँकी लेखनलाई अभिनयमा केन्द्रित राखेर टुङ्गाउन चाहन्छु । किनकी त्यसो नगर्नु म आफ्नो मुख्य पहिचान माथी अन्यााय गरे सरह अनुभुत गर्न बाध्य हुनेछु । मेरो चलचित्र अभिनयको यात्रा २०२६ सालमा शुरु भएको हो । त्यो भन्दा अगाडी म नाटकमा अभिनय गर्थे । यो यात्रा अहिले सम्म पनि निरन्तर चलिरहेछ । २०२६ सालमा म जुन दिन परिवर्तन चलचित्रको सुटिङ्गका लागि निस्के त्यही दिन मैले एउटा कुरा मन मनै निर्णय गरेको थिए । त्यो हो म चलचित्रको अभिनयलाई भिन्न दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने कोसिस गर्नेछु । त्यो अध्ययन आजको दिन सम्म पनि जारी छ र त्यो कोशिस पनि आजको दिन सम्म जारी छ ।
मैले सवैभन्दा पहिला जान्न खाजेको कुरा भनेको मैले अभिनय गर्न लागेको पात्रलाई म भित्र मिसाउने की त्यो पात्र भित्र मलाई मिसाउने । के भिन्नता हुन्छ त ? यी दुई पृथक प्रस्तुतिकरण विच मैले सोचेको कुरा मैले सोचेभन्दा धेरै गाह्रो विषय रहेछ । पात्र र वैयत्तिक यथार्थको मिश्रणबाट जन्मने चरित्रमा कुन पाटो बढी हावि भएको छ ? त्यो अध्ययनले मात्रै मेरो उत्सुकता मेटाउन सक्दो रहेछ तर त्यो मात्रात्मक सन्तुलन वा असन्तुलनको अध्ययन, पहिलो अध्ययन बराबरकै गहिरो विषय भित्र पर्दो रहेछ । यति मात्र बुझ्न पनि मलाई एक दशक भन्दा बढी लाग्यो । यो मनौवैज्ञानिक पनि र अमुर्त मनोवेगको भित्री धारबाट सृजना हुने यथार्थ रहेछ, कल्पनाको धरातलमा उभिएको । मैले मलाई मैले निर्वाह गर्ने चरित्रबाट कहिल्यै पनि अलग वा टाढा राख्नै सकिन । आफैलाई अलग वा वेग्लै दृष्टिकोणबाट सञ्चालन गर्न सजिलो होला, पात्रको यर्थाथबाट आफुलाई अलग राख्न कमसेकम एकै जुनि भित्र गर्न सकिने कर्म हैन रहेछ ।
पात्रको सोचाईको क्रममा अनफुलाई विस्तारै ढाल्दै लग्न सकिदो रहेछ । त्यस्तै बोल्ने, त्यसरी नै हिड्ने, त्यसरी नै हेर्ने, त्यसरी नै अङ्ग, अङ्गलाई परिचान गर्ने त्यसो गर्न सकिदो रहेछ । तर त्यो पात्र भित्र बास गर्ने मन र मुटु चाहिँ त्यो पात्रको अभिनय गर्ने अभिनेता, अभिनेत्री कै हँदोरहेछ । यति अभिन्न हुादो रहेछ की छुट्टाउनै नसकिने । तर विश्व भरीका परिस्कृत सुचिमा परिसकेका कलाकारहरु पनि जीवनभर त्यसलाई पात्र र आफुलाई छुट्टाउने प्रयत्नमा लागेका हुँदो रहेछन् र यसमा थोर बहुँत सफल पनि हँदा रहेछन् । जति यो मामलामा सफल हुँदो रहेछ त्यति मात्रामा उनीहरुको अभिनय पनि सवल र प्रभावकारी हुँदै जादो रहेछ ।
मैले मेरो अभिनय यात्रालाई यही अध्ययनको पहिलो पाठशालाको रुपमा ग्रहण गरेको छु । यहि पाठशालाको रसायन कक्षमा म प्राक्टीकल गर्दै रहेछु । प्राप्ती सन्तुष्टी हैन, तर सन्तुष्टि सवै भन्दा ठुलो प्राप्ती हो । यो क्षेत्रमा नलागेर अर्को क्षेत्रमा लाग्नु पर्ने रहेछ भनेर सोच्ने मान्छेहरु मैले हरेक क्षेत्रमा भेटेको छु । मैले पनि यदा कदा त्यसरी नै सोचेको छु । तर आज आएर म यो कुरामा विश्वस्त छु की मैले जे रोजे सही राजे । अरु बिधामा के थाहा के हुन्थ्यो ? यो अनुमानको विषय भयो अब म यो क्षेत्रमा जे छु आजको यथार्थ हो । जुन यर्थाथबाट मैले प्रयाप्त सन्तुष्टी प्राप्त गरेको छु । यसर्थ म मेरो पेशाको पुजा गर्छु, श्रद्धा गर्छु र गर्व पनि । आम जनताबाट प्राप्त माया, स्नेह र सदभाव नेपालमा विरलै मात्र प्राप्त हुन सक्ने कुराहरु हुन् । जुन हामीले, मैले लगायत सवै कलाकार साथिहरुले प्राप्त गरेका छौं । यो प्राप्तीले हामीलाई सन्तुष्टि दिएको छ । मैले अगाडी नै भनि सके सन्तुष्टि सवैभन्दा दुर्लभ प्राप्ती हो । मैले मेरो अभिनय यात्राको दौरान प्राप्त गरेको सवैभन्दा ठुलो एैश्वर्यका रुपमा आमजनताको माया, स्नेह र सद्भावलाई लिएको छु । यो पेशाले मलाई एउटा पहिचान दिएको छ र त्यो पहिचानले सन्तुष्टी.............. त्यसैले म यसै यात्रामा लागि रहने छु, अघि भने झै अध्ययनको क्रमलाई निरन्तरता दिदै ।
(लेखक कुशल अभिनेताका साथै चलचित्र निर्देशक र गीतकार पनि हुनुहुन्छ)